सरकारी चिकित्सकमा डा.रविन खड्काको प्यानल विजयी • Health News Nepal
काठमाडौं २४ , श्रावण २०७७
सरकारी चिकित्सक नेपाल (गोदान)को आज सम्पन्न निर्वाचनमा डा. रविन खड्का नेतृत्वको प्यानल विजयी भएको छ । बरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. विजय थापा र उपाध्यक्षमा डा.शुशिल मोहन भट्टराई विजय हुनुभएको छ।
त्यस्तै गरी महासचिवमा डा .कीर्तिपाल सुवेदी निर्वाचित हुनुभएको छ।
मतदान विहान ७ बजे देखि अपरान्ह ५ बजेसम्म भएको थियो । अनलाइन भोटिङ विधिबाट मतदान भएको थियो। १०० मध्ये ९४ प्रतिशत भोट खसेको थियो।
Tags: #government of Nepal